Schauinsland Reisen waxay maamushaa ganacsiga duulimaadka shirkadda 'Airxelerate'
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Schauinsland Reisen waxay maamushaa ganacsiga duulimaadka shirkadda 'Airxelerate'
Jarmalka Jebinta Wararka • Boostada martida • News • Technology • Sirta Safarka • Wararka kala duwan
Airxelerate waxaa lagu aasaasay magaalada Berlin ee sanadka 2018. Ka sokow inay soo saarto khadkeeda wax soo saarka Calisto, shirkaddu waxay sidoo kale sii deysay xalal IT-ga ah oo loogu talagalay shirkadaha dalxiiska.
Safarka Jarmalka Schauinsland Reisen wuxuu u adeegsan doonaa barnaamijka 'Calisto Distribution Platform' ee Airxelerate qaybinta suuqa.
Mustaqbalka, nidaamka cusub wuxuu taageeri doonaa maareynta hawlwadeennada duulimaadyada ballaaran ee duulimaadyada wuxuuna hubin doonaa in bixinta duulimaadku ay si wanaagsan ugu qaybiso lamaanaha wadaha dalxiiska.
Schauinsland Reisen waxay ku fidinaysaa kaabayaasheeda IT-ga qalabka loo yaqaan 'Calisto Platform Platform' oo ka socda Airxelerate. Mustaqbalka, nidaamka cusub wuxuu xakamayn doonaa hawlwadeenada duulimaadyada badan ee duulimaadyada wuxuuna hubin doonaa in duulimaadyada la siinayo ay sifiican ugula wadaagaan la-hawlgalayaasha wadayaasha dalxiiska.
Schauinsland Reisen ayaa rajaynaysa, in nidaamku fududayn doono xakamaynta duulimaadyada. “Schauinsland Reisen wuxuu si dhow ula shaqeeyaa shirkado duulimaad oo aad u tiro badan adduunka oo dhan. Hawada sare waxay noo suuro gelinaysaa inaan si buuxda oo firfircoon u maamulno adeegyadan kala duwan, ”ayuu yiri Markus Förster, Madaxa Qeybinta Duullimaadyada ee Schauinsland Reisen.
Kala-bixinta Calisto Distribution waxaa loogu talagalay shuruudaha ganacsiga duulimaadka fasaxa caadiga ah, laakiin isla mar ahaantaana, waxay u dhiseysaa buundo farsamo shirkadaha diyaaradaha ee caalamiga ah. Nidaamka Qaybinta Calisto wuxuu awood u siinayaa shirkadaha duulimaadyada iyo kuwa dalxiisayaasha inay si otomaatig ah uga shaqeeyaan liisaska magacyada shirkadaha duulimaadyada ee nidaamyada adeegga baasaboorka adag iyo nidaamyada xakamaynta bixitaanka.
“Fasaxyada iyo diyaaradaha duulimaadka loo qorsheeyey waxay adeegsadaan muuqaallo nidaamyo aad u kala duwan. Airxelerate waxay u jajabisaa xuduudaha farsamada si aad u bartilmaameed ah waxayna hubisaa habab isku mid ah oo ku saabsan iibka diyaaradaha ee dalxiiska, "ayay tiri Nina Sifi, oo ah Agaasimaha Maamulka Airxelerate Schauinsland Reisen waa hawl wadeenkii ugu horreeyay ee dalxiis ee adeegsada nidaamka xakamaynta iyo iibka daruuraha ku saleysan ee la soo bandhigay sanadkii hore.
Ku saabsan Airxelerate
Airxelerate waxaa lagu aasaasay magaalada Berlin ee sanadka 2018. Ka sokow inay soo saarto khadkeeda wax soo saarka Calisto, shirkaddu waxay sidoo kale sii deysay xalal IT-ga ah oo loogu talagalay shirkadaha dalxiiska. Airxelerate waxay ka gudubtaa xuduudaha farsamo ee u dhexeeya shirkadaha duulimaadyada iyo dalxiiska waana karti u leh maaraynta xogta iyo iibka.
Qaab dhismeedka agile iyo tikniyoolajiyad casri ah, xalka ku saleysan daruuraha Airxelerate wuxuu yareynayaa kakanaanta iyo kharashyada. Dhisida khibrad tobanaan sano ah, aasaasayaashii bilowgii Berlin waxay jabinayaan dhul cusub oo tikniyoolajiyadda safarka ah.
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Jarmalka riix halkan.